China 5 matanda A2 Kucheka Mat, 661A2, Kuzviporesa wega Kucheka mat Kugadzira uye Fekitori | Allwin
Self kuporesa A2 kucheka mat fekitori yakananga
Yega-yekuporesa yekucheka bonde, chengetedza yako yekushanda tafura pamusoro, Iyo bonde pamusoro yaive yakapfava PVC, usakuvadza iyo yekucheka blade, Blades anonyanya kusimba.You can use this mat as a desktop protector or DIY cutting board at your room, kumba, chikoro kana hofisi.
Kucheka kwakarurama mativi maviri, maviri masendimita uye metric gridlines & angles.Mat size: 24.8 x 18.5inches, Grid saizi: 24 x 18inches, ukobvu 3MM, akasiyana angles 30 ° 45 ° uye 90 °, Mutsara kudhinda kwakajeka, kubatsira kudhirowa Angle mutsara.
Chipo chakakwana chevanyengeri uye hobbyists! Professional fekitori yakananga kutengesa, mhando yakanaka nemutengo Zvakakurudzirwa kwazvo kune muimbi, vagadziri, vavaki, quilters, engraver uye hobbyists.
Item Model Nhamba 661A2
Item Kurema 1.35kg nechidimbu
Chigadzirwa Zviyero 23.62 x 17.72 x 0.12 inches / 60 x 45 x 0.3 cm
Saizi (Yakatarwa.) A2
Pashure: 5 akaturikidzana A1 Kucheka Mat, 661A1, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Zvadaro: 5 masheya A3 Kucheka Mat, 661A3, Kuzviporesa wega Kucheka mat
5 akaturikidzana A4 Kucheka Mat, 661A4, Self kurapa Cu ...
3 akaturikidzana 3 Kucheka Mat, 883A3, Kuzviporesa wega Kucheka ...